Fanomanana paikady: Fananganana tetezana fa tsy rindrina · Global Voices teny Malagasy
Fanomanana paikady: Fananganana tetezana fa tsy rindrina
Ny tetezana mampifandray fa ny rindrina mampisaraka
Voadika ny 10 Jolay 2019 8:34 GMT
Filaharana Conga, fihaonamben'ny Global Voices 2015. SARY: Jeremy Clarke
Ho an'ny olona maro, dia toa nahatsapa izy ireo fa niova tanteraka izao tontolo izao tamin'ny 9 Novambra. Saingy ny zava-nitranga tany Etazonia no hany ohatra farany amin'ny fanamby izay ho atrehan'ny maro amintsika ato ho ato, satria mirongatra ireo mpitarika mpanao didy, mafy loha sy mampidi-doza ary manamafy orina ny fahefany any amin'ireo firenena toa an'i Filipina, India, Rosia, UK, Ejipta, Syria, Oganda, Venezoela. Azo antoka fa saika mihazona izany bebe kokoa ny ho avy akaiky.
Mampahatsiahy antsika ireo fivoaran-draharaha ireo fa tsy mbola vita velively ny asa fiarovana ny zo fototry ny vahoaka. Mitaky fahamalinana maharitra, ary indraindray tolona izany – na dia manaiky sy mahatakatra izay manosika ireo olona tsy itovizantsika hevitra aza isika.
Fotoana izao ho an'ny Global Voices mba hiresahana am-pandresen-dahatra sy maika – ho antsika mba hanamafy ny ezaka ataontsika hananganana tontolo iray izay ny fiombonam-pihetseham-po no teboka fanombohana amin'ireo tantara ifanakalozantsika.
Nanangana fiarahamonina matanjaka isika amin'ny alalan'ny famolavolana fifandraisana lalina manavatsava kolontsaina, fiteny ary fahasamihafana eo amin'ny hevitra. Satria mitady tari-dalana amin'ny fomba fanaovana izany ny ankamaroan'izao tontolo izao, dia lasa ampahany maika kokoa amin'ny iraka ataontsika ny fizarana sy ny fanamafisana ny traikefantsika sy ny fahaizan-tsika manokana.
Tamin'ny resadresaka niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana sy ny ekipa fototra ary ny ekipa famoahan-dahatsoratra, ary koa ireo lisitry ny fiarahamonina anatiny, dia mahita lohahevitra maromaro isika izay maneho ny sasany amin'ireo ahiahintsika:
Fialokalofana sy ny mpitsoa-ponenana: ny hevitra hoe ny fiarovana sy ny filaminan'ny fifindrana no zavatra iray ilaintsika rehetra
Mari-panondroana sy nasionalisma: mijery ny fomba iainan'ny tsirairay sy ny fiatrehana ny fanavaozana ny fanindrahindram-pirenena any amin'ny firenena maro tsy mitsaha-mitombo isa
Vondrom-piarahamonina sy ny teknolojia: mahatakatra ny fomba fifandraisantsika amin'ny teknolojian'ny fifandraisantsika, ary ny fiantraikan'izany fifandraisana izany amin'ny hoe inona sy izay fantatsika sy hamolavolana ny fahatakarantsika an'izao tontolo izao
Teboka fanombohana fotsiny ho an'ny fifanakalozan-kevitra ireo rehefa miseho ireo hevitra hafa. Faly izahay mahita ny adihevitra mivezivezy ao amin'ireo lisitra sy vondrona karajia anatiny misy antsika, ary koa ireo tantara lehibe amin'ny fizarana Fitantarana Manokana ny Fifidianana Amerikana.
Miomana mialoha amin'ny resadresaka mivantana tsirairay miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ihany koa izahay ao amin'ny ekipa fototra mikasika ny manodidina ny fanadihadiana ny vondrom-piarahamonina, izay tena mahavokatra sy manome hazavana. Raha mbola tsy nameno ny fanadihadiana amin'ny fomba mahaleotena ianao, na mbola tsy nisoratra anarana amin'ny tafatafa mivantana, dia mandrisika anao izahay hanao izany haingana araka izay tratra. Araka ny fantatrao, hivory ao Mexico City amin'ny 30 Novambra-4 Desambra araka ny fanaony isa-potoana momba ny paikady ny ekipa fototra, ary ho ampahany mana-danja amin'ny fandaharam-potoananay ny hevitrao sy ny tolo-kevitrao. [Mba hahamora kokoa ny fisoratana anarana, dia nampianay taratasy famenoana eto ambany. (efa vita)]
Amin'ny herinandro manaraka dia miandrandra ny hampitombo ny resaka ataonay ao anatin'ny Global Voices sy ireo mpiara-miombon'antoka manerana izao tontolo izao izahay, ary koa handre ireo tantara sy adihevitra azonareo tamin'ny namanareo sy ny fianakavianareo ary ny vondrom-piarahamonina, ​​na aiza na aiza misy anareo.
23 ora izayAngola